Freelance Writing | Handy Web
Home &sol; Freelance Writing
လူကြီးမင်းတို့မှာ ၀က်ဆိုက်မှာတင်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားမဂ္ဂဇင်းနဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ သုံးချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် သတင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ Handy Web က အင်္ဂလိပ်ကနေ မြန်မာစာကို ဘာသာပြန်ဖို့ ကူညီပါရစေ။ ဒါ့အပြင် လူကြီးမင်းတို့မှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်ကြားရေးဗီဒီယို သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများမှ စကားပြောများကို ဘာသာပြန်လိုပါကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Translation Service က ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖောက်သည်များ စိတ်ဝင်တစားသိရှိဖို့ နဲ့ ၀ယ်ချင်သုံးချင်စိတ်ဖြစ်လာဖို့ Copywrite လုပ်ချင်ရင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့က ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ဆိုရှယ်မီဒီယာ သို့မဟုတ် အခြားသော စာစောင်တွေမှာ လိုအပ်တဲ့ ကွက်လပ်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖြည့်ပါရစေ။
ဘာသာပြန် နှင့် ကော်ပီစာရေးခြင်း ဈေးနှုန်းများ
Translation A4 one page (350 words) 8000 MMK (8 USD)
Translation A4 one page with graph/figure 5000 MMK (5 USD)
Transcription from audio/video 10 min 5000 MMK (7 USD)
Copywriting Depend on style, collateral and medium. Contact us to discuss
ချွင်းချက်အနေနဲ့ ဥပဒေနဲ့ဆိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများ ဘာသာပြန်ခြင်းကိုမူ ဆောင်ရွက်မပေးပါ။ များပြားသော စာမျက်နှာများ သို့မဟုတ် အသံဖိုင်၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို ဘာသာပြန်လိုပါက ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ဝင်စားပါက အသေးစိတ်ဆွေးနွေးဆက်သွယ်ရန် Contact us! ကို နှိပ်ပါ။